VeMDC-T neMDC Alliance Vokweshana paNyaya yeKunetsana Kuri muBato reMDC-T
Zvita 16, 2021
Muzvare Thokozani Khupe, mutewedzeri wemutungamiri weMDC-T vakakwira kudare reHigh Court vachida kumisa kudzingwa kwavo muMDC-T.
Mubato ReMDC-T rinotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora munonzi maita kusawirirana pamwe nekufungirana kwakanyanya izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kukanganisa mashandiro ebato rinopikisa iri.
Nekuda kweizvi, nhengo nhatu dzeMDC-T dzinoti mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Thokozani Khupe, meya veGweru VaJosiah Makombe pamwe nameya veChitungwiza VaLovemore Maiko vakakwira kudare reHigh Court muBulawayo dzichida kuti dare iri rimise hurongwa hwebato ravo hwekuda kuvadzinga muzvigaro zvavo muparamende nemumakanzuru.
Vatatu ava vanonzi vamwe venhengo dzinonzi dziri kupomerwa mhosva yekudyidzana nerimwe bato rinopikisa reMDC Alliance.
Vakakwirirwa kudare vanoti VaMwonzora, sachigaro vebato reMDC-T, VaMorgen Komichi, munyori mukuru Amai Paurina Mupariwa, mutauriri weparamende VaJacob Mudenda pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo.
Mamwewo mapoka enhau anoti vamwe venhengo dzinonzi dziri kuda kudzingwa idzi dzakatotanga kare hurongwa hwekudzokera kuMDC Alliance.
Mutauriri weMDC-T, VaWitness Dube, vanoti idzi inyaya dzavange vasingade kuti vataure nezvadzo asi vanoti nekuda kwekuti inyaya dzave mumadandemutande, vachangotaura pavanogona.
Asi VaDube vanoti chekutanga bato ravo reMDC-T harisi kupomera bato reMDC Alliance mhosva yekuve nechekuita nezviri kuitika mubato ravo, vachiti zvinozivikanwa kuti MDC-T haicherechedzi MDC Alliance sebato uye kuti vanhu ndivo vari kutaura izvi nekusaziva.
VaDube vanoti ivo sebato vaita matambudziko nemutewedzeri wavo, Muzvare Khupe uye vanotiwo manyepo ekuti bato ravo rine hurongwa hwekudzinga dzimwe nhengo, vachiti nhengo idzi dzakangomhanya kudare redzimhosva dzisina kana kupira nyaya yadzo kubato ravo.
Ukuwo, nhengo yeMDC Alliance uye vari meya weguta reHarare vakambomiswa basa , VaJacob Mafume, vanoti VaMafume vanoti bato ravo harineyi nemapishapisha ari kuitika muMDC-T vachiti zvinozvikanwa kwese kuti chekuba kazhinji kacho chinozvimbira anenge achiba.
Vanoti MDC-T yakatora mavhoti eMDC Alliance asiri ayo ichisasana nebato reZanu PF.
Hurukuro naVaWitness Dube pamwe naVaJacob Mafume
Vatsigiri veNhabvu Votaura Pamusoro peKuburitswa kwemaWarriors muAFCON 2021
VaMnangagwa Vanoyambira Nhengo dzeZanu PF Kuti Dzingwarire veMasangano Akazvimirira